Company profaịlụ - Rise (Tianjin) Steel Sales Co., Ltd
Company Slogan: ngwaahịa si Bilie ígwè
Company iru eru: The ụlọ ọrụ agbaso ụkpụrụ nke "Quality bụ mkpa, management bụ oké mkpa". Anyị ụlọ ọrụ kemgbe ruru eru site ISO9001: 2008, API asambodo, EU akwụkwọ, OA akwụkwọ. China nhazi ọkwa otu akwụkwọ nke àgwà management usoro asambodo, China nhazi ọkwa otu ụlọ ọrụ mmepụta ihe na ikike akwụkwọ.
Company Service: Rise na-onwem na ọtụtụ mba elu mmepụta edoghi na pụrụ iche ngwá ọrụ nke ígwè anwụrụ mgbochi corrosion, na-eme ya ike nke na n'ịmalite ọrụ a dịgasị iche iche nke ígwè anwụrụ mgbochi corrosion engineering dị ka otu na abụọ anọ na o sie epoxy (FBE) uzuzu mkpuchi. Ugboro abụọ polyethylene (2PE) na 3PE mkpuchi, abụọ polypropylene (2PP) mkpuchi, 3PP elu mkpuchi, na n'ime na elu plastic coatings. Ke adianade do, na ụlọ ọrụ nwekwara ike uwe ígwè anwụrụ na-emegide corrosion ágbá tinyere IPN8710 na-abụghị egbu egbu mkpuchi na ígwè anwụrụ mgbidi, epoxy coal tar mkpuchi, epoxy resin mkpuchi, na ciment ngwa agha lining.
Ibute ndị ahịa mbụ na-ewere àgwà dị ka ya ndụ. The ụlọ ọrụ n'ọrụ agadi injinia na mmepụta ahụmahụ ma guzosie ike nkọwa nke tupu ire ere, na-ere ya ere na mgbe-ire ọrụ. Ọ na-eburu si onye na mkpokọta àgwà akara site dum usoro iji mee ka ngwaahịa na ọrụ anyị pụrụ ịdabere, guzosie ike a ogologo oge nkwado na nkwanyerịta uru mmekọrịta na ahịa.